सर्वोच्चमा जारी आन्दोलनप्रति ओलीको कटाक्ष, कुखुराको अण्डा मन्साएर क्यान्सर निको हुन्छ ? – Mahilajagaran
सर्वोच्चमा जारी आन्दोलनप्रति ओलीको कटाक्ष, कुखुराको अण्डा मन्साएर क्यान्सर निको हुन्छ ?
महिला जागरण । ७ मंसिर २०७८, मंगलवार मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायधीशको राजीनामा मागरे जारी आन्दोलनलाई कुखुराको अण्डा मन्साएर क्यान्सर रोग निको पार्न खोजेको संज्ञा दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन गरीरहेको नेपाल बार एसोसिएसन र कानून व्यवसायीले क्यान्सरको रोगीलाई कुखुराको अण्डा मन्साएर निको पार्न खोजेजस्तै भएको बताए ।
मंगलबार महाधिवेशनबारे सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियाका उक्त कुरा बताएका हुन । उनले सर्वोच्च अदालतमा जारी आन्दोलन दुःखद भएको पनि बताए ।
उनले टाउकाको औषधी नाइटोमा लाएर सम्भव नहुने भन्दै भने, ‘टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा लगाएर विमार ठिक हुदैन । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेकोप्रति अमुक व्यक्ति हटेपछि भन्ने तरिका ठिक होइन । उहाँहरू प्रति यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि, सेटिङमा सहमत भएर फैसला गरेको देखिएपछि उहाँहरूले त राजीनामा गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई ।’
प्रधानन्यायाधीशको बचाउ गदै उनले भने ‘यद्यपी प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्दैमा न्यायिक क्षेत्रको प्रदूषण कम हुदैन। अनि लागेको क्यान्सर छ कुखुराको अण्डा मन्साउने ? कुखुराको अण्डा मन्साएर क्यान्सर निको हुन्छ ?’
उनले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायालय स्वतन्त्र ढंगले नै चल्नुपर्ने बताए । उनले कोही कसैबाट संविधान र कानुन मिच्ने काम भए न्यायालयले निष्पक्ष फैसला गर्ने भएकाले नै अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास बढ्ने बताए ।
हरेक निकायका सीमा हुन्छन् । हामीले लोकतन्त्रका लागि लडेको हो । तर नेपालमा फैसला संविधानमा लेखिएको भन्दा विपरीत हुन थालेको आरोप लगाए । संसद् सरकार हेरफेर र गठन गर्ने थलो हो तरअदालतका आधारमा सरकार फेरिन थालेको ओलीले बताए । उनले भने ‘प्रधानमन्त्री परमादेशबाट हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा पनि संसद्ले थाहा पाएन ।’